Cloud Player Player: Mamela umculo wasimahla kwilifu kwi-iPhone | Iindaba zeGajethi
U-Eder Esteban | | Abadlali, software
Ukusasaza kuyeyona ndlela ithandwayo yokuphulaphula umculo namhlanje. Yindlela elula kakhulu, kwaye ayifuni ukuba sisebenzise indawo yokugcina ifowuni. Nangona kukho ezinye iindlela onokukhetha kuzo babheja kwiinkqubo ezintsha, njengeLifu loMculo Player. Igama layo sele liyenza icace kuthi, kwaye isebenzisa ilifu ukudlala umculo.
Sijongene nenketho yasimahla yokuphulaphula umculo kwilifu kwi-iPhone yethu, kuba usetyenziso luhambelana kuphela ne-iOS (okwangoku). Ke ngoko, Umdlali woMculo weLifu uboniswa njengenye indlela elungileyo yokumamela umculo wasimahla.
Ilifu ke ngoko liba yinto ephambili kolu khetho. Enye yeenzuzo zayo kukuba ixhasa iinkonzo ezahlukeneyo zelifu (Google Drayivu, Ibhokisi, iDropbox, OneDrive kunye neOnCloud). Ngale ndlela, ungalayisha umculo efini kwaye ngenxa yoko akufuneki usebenzise indawo yokugcina kwifowuni.
Ke, uya kuba nakho ukumamela wonke umculo wakho usebenzisa i-Cloud Music Player. Konke oku ngaphandle kokukhathazeka ngendawo yokugcina esinokuyifumana emnxebeni ngaphandle kwexesha. Kwisicelo ngokwaso siza kubona zonke iinkcukacha ngengoma nganye.
Ukongeza kwezi ziqhelekileyo (ingoma, imvumi, icwecwe, unyaka ...) Iya kusixelela ukuba yeyiphi inkqubo yefu egcinwe kuyo. Ezinokuba luncedo kakhulu kwimeko yokuba sisebenzisa ngaphezulu kwesinye sazo. Iya kusivumela ukuba sibe nolawulo oluchanekileyo ngakumbi ngawo onke amaxesha.
Cloud Music Player ikwasivumela ukuba sigcine iingoma kwaye ke simamele kubo nokuba asinalo uqhagamshelo lwe-Intanethi kwi-iPhone. Ilungele naliphi na ixesha, nokuba sihamba uhambo. Ukukhuphela isidlali soMculo weLifu simahla, sinokuthenga ngaphakathi. Unga khuphela apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Abadlali » Cloud Player Player: Dlala umculo wasimahla kwi-iPhone yakho kwilifu
Ungalufihla njani unxibelelwano kwi-Instagram ukuze bangandiboni kwi-Intanethi
IHuawei ibandakanyeka ngokupheleleyo ekonyuseni amandla okudala abantu abancinci